GEEDDI IYO GEDDIISII
Cabdullaahi Yuusuf 'Marka labaad ee aad ii imaanayso iska soo xiir Garka'
Intuu socday Kulankii kooxaha Soomaalidu ku yeesheen Kenya ayaa Mowliid Macaan Maxamuud oo ah qabqable aan hubeysnayn, waxa uu shirka ka dhex yiri 'waxaan ahay Qoolley, Qoolleyna wax ma qaladdo.' Laba sano iyo laba bilood kaddib, la yaab ma ahayn in Ra'iisal Wasaare Cali Maxamed Geeddi uu shalay u magacaabo Mowliid Macaan inuu yahay Wasiirka Dhulka. Shimbiruhu ama ha haadaan ama geed ha fuulaan waa ku qasban yihiin dhulka, sidaa awgeed ayaa dadka Xamar ku dhashay waxa ay yiraahdaan 'shimbirtii buubta risaqeeda dhulka.'
Kaddib markii xubnaha Baarlamaanku iyagoo xiiqsan ay si caro leh ku rideen xukuumaddii Geeddi bishii hore, waxaa raja laga qabay in markan wax is beddeli doonaan. Hase ahaatee, waxa ay sheekadu ku soo idlaatay hadalkii odoyaashii hore ee Soomaalidu oran jireen oo ahaa 'jug, jug, meeshaada joog.' Waxa ay tani ka marag-kacaysaa in Geeddi sida Cabdullaahi Yuusuf, Madaxweynaha oo kale aanu maqlaynin dhawaaq aan ahayn kan ka imaanaya Ethiopia.
Sida iska cad, maadaama la tixgeliyey dano aan Soomaali u adeegeyn, qaabka Wasiirada loo soo xulay waxaa weli ka muuqata isku-dhex yaac. Waxaa dad badani liqi la' yihiin halbeegga la adeegsaday, si loo magacaabo Cabinet dhammeystiran (all-inclusive). Ma qabqableyaasha xoogga leh ayaa tixgelinta la siiyey? Mise beelaha? Mise dalalka deriska? Wasiirada lagu soo celiyey booskoodii - beel iyo qabqable - mid ay waafaqsan tahay ma cadda. Laakiin, waxaa meesha taalla in nidaamka lagu sameeyey Nairobi ay sii yeerinayaan dalalka deriska iyo kooxaha dagaalka, gaar ahaan kuwii xoogga is bidayey.
Taya-xumida Wasiirada keliya ma ahan meelaha ishu ku dhacayso ee waa tira-badnaanta. Xukuumadda lagu dhawaaqay waxba kama duwana tii Cumar Carte Qaalib ee lagu naynaasi jiray 'Mini-Parliament.' Tallaabada sidan oo kale loo qaaday, waxa ay sumcad weyn u celinaysaa xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre oo weli dadka ula muuqata inay ahayd mid caddaalad-darro ku dhisan.
Si kasta ha noqotee, waxaa waxtar fiican noqon lahayd hadduu Geeddi tixgelin lahaa ama ugu yaraan ku xisaabtami lahaa talooyinkii ka imaanayey culumaa'uddiinka, aqoonyahannada iyo bulshada rayidka ah. Talooyinkaas, waxaa ugu horreeyey tuu soo jeediyey Sheekh Cali Wajiis oo jooga Saudi Arabia. Waxaa mudan in Sheekh Cali looga mahad-celiyo tala-soo-jeedintiisa ku tiirsan waaqiciga lagu jiro 'pragmatic proposal.' Ilaahay ajar ha kaa siiyo Sheekha jaceylka uu u qabo wanaagga dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisa - aamiin.
Xitaa, marna lama dhugan oo lagama fekerin talooyinkii ka imaanayey khubarada reer galbeedka, sida Matt Bryden oo bilooyinkanba ku talinayey in laga fiirsado qaabka dowladda loo dhisayo. Brydan oo ah geesi aan gabban oo u hiiliya Soomaalida, waxa uu ka tirsan yahay Hay'adda caalamiga ee ka hortagga dhibaatooyinka (International Crisis Group) ee fadhigoodu yahay Brussels. Waa ninkii yiri "taariikhda ayaa sheegi doonta in hoggaamiyeyaasha Soomaalidu ay diyaar u yihiin inay ku dhaqmaan hoggaamin daacad ah, oo ay dalkooda ugu soo dabaalanayaan waddo uu ku soo kabsado."
Mareykanku, waxa aysan rabin inay maqlaan waxa ay ku dhegeystaan dhego aan maqalka u daloolin 'deaf ears.' Run ahaantii, waxaa laga wada dheregsan yahay in Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geeddi aysan lahayn dhego ay ku dhegeystaan talooyinka ka imaanaya culumada, oo ah hantida keliya 'asset' ee maanta u haray Soomaaliyada burburtay. Madaxweynuhu, isagu waaba seef la bood 'extremist' - wuxuu u arkaa culumadu inay cadow u yihiin isaga.
Waxaan xusuustaa laba sano ka hor mar aniga iyo nin weriye ah oo wadaad ah aan la kulannay Cabdullaahi Yuusuf. Weriyaha ila socday baa wuxuu lahaa gar aan dheereyn, laakiin u eg kan dadku yiraahdaan 'gar iqwaan.' Cabdullaahi Yuusuf baa wuxuu jalleecay dhinacii weriyuhu ka xigay, waxaana uu ku yiri "marka labaad ee aad ii imaanayso, iska soo xiir garka." Waxa uu sii raaciyey 'ragga garkaas leh waanu is neceb nahay."
Dhibaatada kale ee hor taagan ee imtixaanka ku ah dowladdan cusub waa halkii ay degi lahayd, waxaana ku adkaatay inay tagto caasimadda Muqdisho 'maadaama Cabdullaahi Yuusuf uusan reer Muqdisho ka tirsanayn.' Haddaba, marka uu ogyahay Cabdullaahi Yuusuf in kursiga uu ku fadhiyaa uu yahay kii reer Muqdisho isku dilayeen 14 sano, reer Muqdishana ogyihiin in Cabdullaahi uu ka dhacay kursi maxaa labada dhinac la gudoon?
Dhaqanka Soomaalida waxaa la yiraahdaa "geesigu ma ahan kan guushiisa keliya qirta, ee waa kan guuldarradiisana qirta." Reer Muqdisho waa inay qirtaan inay fashilan yihiin. Qaladka oo la qirto waxaa ka imaanaya sixitaan. Toddobaadkii hore waxa uu Cabdullaahi Yuusuf caddeeyey inuusan diyaar u ahayn inuu tago Muqdisho "illaa iyo inta ay ku sugan yihiin' ayuu yiri 'kooxaha aadka u hubeysan, sharci iyo kala dambaynna aysan jirin." Madaxweynuhu markuu tagay Yemen, Saudi Arabia, Djibouti, Uganda, Sudan iyo Masar oo uu ku noqday Nairobi, waxa uu niman siyaasiyiin ah ku yiri "dhammaan madaxda dalalkaas waxay igu yiraahdeen, reer Muqdisho ma kula socdaan?" Waqtiga ayaa su'aasha ka jawaabi doona!